सबै समस्याको समाधान डीएनए परीक्षण नहुन सक्छ - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | २८ जेष्ठ २०७४, आईतवार ०२:२३ |
ललितपुर । ‘विज्ञान असजिलो पनि हुन्छ, यसले सामाजिक संरचना हेर्दैन । जे छ, त्यो देखाइदिई हाल्छ । कहिलेकाहीँ त डीएनए नगराइदिए हुन्थ्योजस्तो लाग्छ । सबै समस्याको समाधान डिअक्सिराइवो न्युक्लिक एसिड अर्थात् डीएनए नै त होइन नि ?’
यो भनाइ राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विकास समिति खुमलटारका कार्यकारी निर्देशक जीवनप्रसाद रिजालको हो । ‘अदालतले कतिपय मुद्दा र व्यक्तिले शङ्काकै भरमा डीएनए गराउनुपर्छ भन्ने छैन । परीक्षणको नजिता र त्यसको असर अर्कै हुनसक्छ ।’ उहाँ भन्नुहुन्छ ।
कार्यकारी निर्देशक रिजाल नेपाली सामाजिक संरचना फरक खालको भएको बताउनुहुन्छ । उहाँ मिलेर बसेको समाज र परिवारमा विशेष परिस्थितिबाहेक डीएनएको पछि लाग्न नहुने जिकिर गर्नुहुन्छ । विधि विज्ञान प्रयोगशालामा यस्तो एक जोडी चार जना बच्चा लिएर आए । रिजालका अनुसार ती बच्चाको डीएनए परीक्षण गरी हेर्दा चार जनामध्ये दुई जना बच्चा दुवै जनाको ठहर भयो भने अन्य एक जना बाबु फरक र एक जना बाबुआमा दुवै फरक देखियो र त्यसले आश्चर्य बनायो ।
कार्यकारी निर्देशक रिजालले जोडीलाई सोध्नुभयो, किन यस्तो भयो ? के यो कुरा ती आमाबुवालाई थाहा थियो । त्यो जोडीले यो कुरा आफूहरूलाई थाहा भएको, डीएनए परीक्षण सही भएको र परीक्षणबाट आएको नतिजाप्रति सन्तुष्ट भएको बतायो । किन यस्तो भयो ? भन्दा त्यो जोडीले पछिमात्र कुरा खोल्यो । खासमा चार जना बच्चामध्ये दुई जना उनीहरू दुवैको थियो । श्रीमान् भारतमा रोजगारीको सिलसिलामा रहँदा ती महिला यौन दुव्र्यवहारको सिकार भएकी रहिछन् । त्यति बेला उनको गर्भमा बच्चा बसेछ । श्रीमान् फर्केपछि ती महिलाले सबै कुरा सुनाइन् । श्रीमान्ले जे हुनु भइगयो, गर्भमा रहेको बच्चालाई स्वीकार्ने वचन दिएछन् । अर्को बच्चा जो दुवै जनाको देखिएन, त्यो बच्चा नातेदारको रहेछ । भतिजाको एक जना युवतीसँग बिहेपूर्व बसउठ रहेछ । ती युवतीबाट जन्मेको बच्चालाई ती महिलाले आफ्नो सन्तानजसरी हुर्काएकी रहिछन् ।
अदालतको पछिल्लो निर्णय डीएनएको नतिजाविपरीत गयो भन्ने कुरा मलाई पनि धेरैले सुनाए तर अदालतले जे ग¥यो त्यो सही ग¥यो । म अदालतको निर्णयलाई हार्दिकताका साथ स्वागत गर्छु”, कार्यकारी निर्देशक रिजालको भनाइ छ । उहाँले कुनै बेला प्रयोगशालामा काम गर्ने वैज्ञानिकसमेत समेत अप्ठ्यारोमा पर्ने गरेको बताउनुभयो ।
Previousहुलाकी मार्गलाई न्यून बजेट
Nextविश्वकप छनौट : जर्मनीको शानदार जित
जथाभावी बाटो काट्ने पैदलयात्रुलाई ट्राफिक कारवाही
९ श्रावण २०७३, आईतवार ०१:१२
आधुनिक जीवनशैलीका यस्ता बानीले बढ्छ मोटोपना
४ बैशाख २०७५, मंगलवार ०९:२२
पशुपतिमा तीजका लागि सबै तयारी पूरा
२९ भाद्र २०७२, मंगलवार १७:२१